Njikwa ogo - SHANDONG FUTURE METAL MANUFACTURING CO., LTD
Mmemme Nleba Ọdịmma Steel Pipe
Nchọpụta akụkụ, Nyocha ihe mejupụtara kemịkalụ, Nnwale na-adịghị emebi emebi, Nnwale arụmọrụ anụ ahụ na nke kemịkal, nyocha metalographic, Nnwale usoro.
Nnwale nha n'ozuzu na-agụnye nnwale nchara nchara nchara, nnwale nchara nchara nchara, nnwale ogologo ọkpọkọ nchara, na nchọpụta ọkpọkọ igwe.Ngwa ndị a na-ejikarị eme ihe bụ: kwụ ọtọ, larịị, teepu, vernier caliper, caliper, nlele mgbanaka, feeler na chuck Chere.
Nyocha ihe mejupụtara kemịkalụ
Jiri spectrometer na-agụ ihe ozugbo, ihe nchọpụta CS infrared, ICP/ZcP na akụrụngwa nchọpụta kemịkalụ ndị ọzọ iji mee nchọpụta metụtara kemịkal.
Nnwale na-adịghị emebi emebi
Ọ na-eji ngwá ọrụ nyocha ndị ọkachamara na-adịghị emebi emebi, dị ka: ultrasonic na-adịghị emebi emebi ngwá ọrụ, ngwá ọrụ na-adịghị emebi emebi, ndị mmadụ na-ahụ anya, eddy ugbu a ule na ụzọ ndị ọzọ iji nyochaa n'elu ntụpọ nke ígwè ọkpọkọ.
Nnwale arụmọrụ anụ ahụ na kemịkalụ
Isi ihe nnwale nke ule arụmọrụ anụ ahụ na kemịkalụ gụnyere: tensile, ike ike, mmetụta na ule hydraulic.Nyochaa nke ọma ihe onwunwe nke ọkpọkọ ígwè.
Ntụle metal tube metallographic n'ozuzu na-agụnye: nchọpụta ike dị elu nke nha ọka, ihe ndị na-abụghị ọla, na usoro A na nchọpụta ike dị elu.N'otu oge ahụ, a na-ahụ ihe niile macro morphology nke ihe ahụ na anya gba ọtọ na obere microscope dị ala.Usoro nyocha nke corrosion, usoro nyocha akara sọlfọ na ụzọ nyocha ndị ọzọ dị ala nwere ike ịhụ ntụpọ macroscopic dị ka ịtọhapụ na nkewa.
Nnwale usoro n'ozuzu na-agụnye ule nlele gbawara agbawa, ule ncha ọkụ na crimped sample, ule ịgbado, mgbanaka mgbanaka, wdg, nke nwere ike nyochaa kpọmkwem geometry nke usoro nrụpụta ígwè ígwè.
Na-atụ dayameta mpụta
Ntụle ịdị arọ
© Nwebiisinka 20022022: Ikike niile echekwabara. Galvanized Steel Pipe Color Coated Coil Galvanized Corrugated Sheet Ppgi Steel Coil Color Coated Steel Roll Corrugated Metal Panels Colorful Steel Coil Ppgi Coil Ppgl Coil Ppgi Steel Coils Colored Coil >